Nri calorie 400: kedu ka ọ bụ, nchịkọta kwa ụbọchị na kwa izu | Nutri Nri
Nke a bụ nri emere maka ndị chọrọ ida pound ndị ahụ. Ọ bụ usoro nke ị ga - etinye obere nri, ọ ga - enyere gị aka idalata n’etiti 4 ½ na 5 ½ kilos n’ime ụbọchị iri. Kwesịrị ịchịkwa calorie ị tinyere ebe ọ bụ na ha enweghị ike ịfe 10.
Ọ bụrụ na ị kpebisiri ike itinye nri a n'ọrụ, ị ga-enwe ahụike ahụike, drinkụọ mmiri dị ka o kwere mee kwa ụbọchị, mee ka nri gị na ihe ụtọ na-atọ ụtọ ma jiri naanị nnu na mmanụ oliv rie nri gị.
1 Ego ole ka ị na-eri na nri kalori 400?
2 Nchịkọta ụbọchị
3 Nchịkọta izu
Ego ole ka ị na-eri na nri kalori 400?
Ọ bụ eziokwu na site na ụdị nri a, calorie dị ala karịa ka anyị nwere ike iche. Yabụ ọ bụrụ na anyị soro atụmatụ ahụ na leta ahụ anyị nwere ike ida gburugburu 4 ma ọ bụ 5 kilo kwa izu. Mana ee, ọ kacha mma ịme nri kalori 400 naanị ụbọchị asatọ ma ọ bụ iri.
Mgbe e mesịrị, anyị nwere ike itinyekwu ọtụtụ mana nri niile anyị kwadoro. N'ụzọ dị otú a, ahụ na-edozi nri, protein ma ọ bụ vitamin ọ chọrọ, mana na-achịkwa ihe gbasara ibu mgbe niile.
Desayuno: 1 infusion of your choice cut with skim milk and 1 entire wheat tost. XNUMX achịkọta nhọrọ ị họọrọ nke ịkpụ na mmiri ara skim na XNUMX dum.
N'ehihie: 1 obere abụba yogọt na mkpụrụ ya.
Nri ehihie: broth ligth, 1 na-ahọrọ nke salad salad akwukwo nri na 1 nke nkpuru osisi ịchọrọ. I nwere ike drinkụọ ọnụ ọgụgụ ofe ị chọrọ.
N'etiti ehihie: 1 iko oroma ma ọ bụ mkpụrụ osisi grape.
Nri: 1 infusion of your choice cut with skim milk and 2 mmiri biscuits ma ọ bụ ìhè bran.
price: efere ligth, 50g. ọkụkọ, azụ ma ọ bụ anụ, 50g. chiiz maka salut, 1 akụkụ mbuaha salad 1 akụkụ nke ìhè gelatin. I nwere ike drinkụọ ọnụ ọgụgụ ofe ị chọrọ.
Emechaa maka nri abalị: 1 ntinye ị họọrọ.
Typesdị nri ndị a, nke anyị na-ekwu maka ịgbakwunye obere calorie na ahụ, ga-eme n'oge kwesịrị ekwesị. Ọ bụ ya mere o ji bụrụ ihe a na-akpọ nri ngwa ngwa. Kedu ihe anyị ga-enweta ya? tufuo ole na ole mmezi kilo. Ma, ọ bụ eziokwu na ebe ọ bụ na aru niile abụghị otu, mgbe ụfọdụ, anyị nwere ike tufuo karịa otú anyị chere. N'ezie, anyị ekwesịghị ị weụbiga nri ókè otu a. Ọ dị mma mgbe niile ịme ya ụbọchị ole na ole wee rie nri mgbe niile mana ọ na-adị mma mgbe niile ma na-edozi ahụ.
Anyị na-ahapụ gị na nchịkọta kwa izu ka ị nwee ike itinye nri kalori 400 dị mfe ma dị mfe:
Nri ụtụtụ: Otu aka nke ọka niile na 200 ml nke mmiri ara ehi skim.
Etiti ụtụtụ: Otu apụl
Nri: Efere dị ụtọ nke letus na kukumba
Nri: jelii na-enwu enwu
Nri Anyasị: Efere broccoli esiri esi na yogọt ejiri skimmed
Nri ụtụtụ: Infusion na iberi ofụri wheat tost na teaspoon nke ìhè jam
Nri ehihie: Otu efere ofe na aka nke ọka wit niile
Nri: Yegọt ejiri skim
Nri abalị: 75 grams nke ọkụkọ na mbuaha salad
Nri ụtụtụ: Infusion ma ọ bụ kọfị naanị ya na achịcha ọka wit niile na mpekere abụọ nke toki
Etiti ụtụtụ: Mkpụrụ
Nri ehihie: gram 95 nke anụ amịrị amị na tomato na salad spinach
Nri: otu iko nke strawberries
Nri Anyasị: Mgwakọta agwakọta, ya na obere chiiz na jelii na-enwu gbaa
Nri ụtụtụ: Otu iko mmiri ara skim na ọka niile
Nri ehihie: Otu aka na lentil na chard
Nri: Mkpụrụ ma ọ bụ jelii
Nri Anyasị: ofe akwukwo nri na yogọt skimmed
Nri ụtụtụ: Otu iko mmiri ọ naturalụ orụ ma ọ bụ kọfị naanị ma ọ bụ infusion tinyere ọka niile
Etiti ụtụtụ: Mkpụrụ osisi vaịn
Nri: Salad nke nwere gram 125 nke azụ esiri ma ọ bụ sie.
Nri: Otu osisi chocolate
Nri Anyasị: Salad na akwụkwọ nri, bean na tomato ma ọ bụ karọt. Nwere ike jiri ya nwee obere ihe ọ juiceụ juiceụ na otu ngaji mmanụ oliv.
Nri ụtụtụ: Otu iko akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ tii na toasts abụọ nke achịcha ọka wit niile
Etiti ụtụtụ: Otu iko nke strawberries
Nri: 100 grams nke toki na stew broccoli
Nri abalị: ofe akwukwo nri na yogot
Nri ụtụtụ: Otu iko mmiri ara skim ma ọ bụ infusion na kuki abụọ na-enweghị shuga
Nri: gram 20 nke osikapa agba aja aja na chard ma ọ bụ akwụkwọ nri
Nri: Mkpụrụ osisi vaịn
Nri abalị: Arugula na celery salad na chiiz ohuru.
Cheta na ikwesiri inu otutu mmiri na infusions ka akwadoro mgbe obula ichoro. I nwekwara ike iwere arụrụ n'ụlọ ìhè efere mgbe ị chọrọ. Enwere ike itinye salad na azụ ma ọ bụ anụ jiri ngwa nri. Mgbe ị na-esi nri, ịnwere ike ịgbakwunye otu ngaji mmanụ oliv, ma n'ehihie ma n'oge nri abalị, ya bụ, kachasị nke ngaji abụọ n'ụbọchị. Ọ bụghị nri a tụrụ aro maka ndị nwere mmefu ike dị elu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nutri Nri » Nkwere maka enyemaka » Nri calorie 400
Kalori 400? Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya nke m nụrụ ma ọ dị m ka ọ bụ ihe enweghị isi na ụdị atrosities a na-ebipụta na ịntanetị nri a bụ ihe mkpofu na agbanyeghị na mmadụ nwere ike ịla kilo 5 n'otu izu na echeghị m na ọ ga-eme a ga-ahapụ ihe niile ahu ọmụmụ na recover gbakee na a okwu nke ụbọchị, e wezụga na ị na-emebi gị metabolism mbịne ya n'ime a ngwa ngwa igwe na n'ikpeazụ ọ ga-ekwe omume ka ida ọzọ ibu ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ onwe gị na ọkpụkpụ na-enweghị akwara obula. ọ kachasị mma iji nwayọọ nwayọọ gbadata ụdị nri a na-ezighi ezi.
Eziokwu bụ na site na ịgbakwunye ọtụtụ vitamin iji hụ na ị na-eri nri kwa ụbọchị nke micronutrients, nri ọ bụla na-egbochi gị na-arụ ọrụ n'oge na-adịghị anya, ihe ọ bụla ị na-eri (ọbụlagodi na ọ bụ naanị ihe dị ka calorie 400 calorie kwa ụbọchị). Otú ọ dị, iri mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri bara ezigbo uru maka ahụ ike ebe ọ bụ na ha nwere ihe a na-akpọ phytonutrients. Nri a na - arụ ọrụ na - atụle na ahụ dị n’isiokwu nwere oke abụba echekwara iji kpuchie ụkọ caloric. Ihe kacha dị nro ị ga - eme bụ iji hụ na ịmịnye protein n'ihe dị ka 1g x dị arọ ma gbakwunye ya na mmega ahụ, iji wee nwee ahụ ike. N'aka nke ọzọ, mmetaghachi ahụ abụghị naanị iri nri ọzọ, karịa calorie nke ahụ chọrọ, yabụ nri nke njirimara ndị a na-esochi nri nri agaghị eduga na mmetụta a na-akpọ rebound.
Ọ mara oke mma! M gbanwere ụfọdụ ihe na m soro ya na-enweghị gafere 400 calories, m furu efu 5 kilo na mbụ 10 ụbọchị na 4 na 10 ọzọ ụbọchị na otu nri! Achọrọ m iso ya ruo ụbọchị iri iji mechaa ọnwa 🙂
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ifelata, gaa leta ọkachamara na-edozi ahụ.
Nri ndị a abaghị uru ma dị egwu maka ahụ gị.
Nkuzi nri di nkpa maka oganihu n’iru nri gi. Gee m ntị! bụ ndụmọdụ m dịka ọkachamara ahụike ahụike n'ọdịnihu.
Zaghachi na Catalina
Ọ jọgburu onwe ya na ụdị akwụkwọ a dịịrị ndị mmadụ!
Ọ dịghị mmadụ nwere ike iri nri a! Ihe niile furu efu bụ mmiri nke anụ ahụ, ọ gaghị ewe ogologo oge iji weghachite ya. Nke a abụghị naanị na ọ naghị arụ ọrụ, mana ọ na - eyi ahụike egwu ma enweghị nkwado sayensị.
Ga leta onye ọkachamara na imepụta ọnụ nri kwesịrị ekwesị maka gị na mkpa gị ga-abụ nhọrọ kacha mma.
O doro anya na ụdị nri ọ bụla edepụtara na ịntanetị.-
Ọ bụ nri gbagwojuru anya n'ihi na anaghị ejupụta nri ndị dị mkpa anyị ga-eri kwa ụbọchị.
Abụba nile, ekworo ndị nwere ike ifelata
Ee, ha enweghi ihe ka mma inye onyinye, ekwula.
A haziri naanị nri a maka ndị nwere BMI karịrị 80, ya bụ, ha dị mkpụmkpụ karịa kilogram 100 ruo 150.
Eziokwu bụ na enwere m nnukwu nsogbu dyslipidemia na ihe ọ bụla, ọbụnadị ọgwụ, enyerela m aka ịchịkwa ogo.
Naanị site na nri na-enweghị gluten ma ọ bụ lactose na mkpụrụ ole na ole, ọtụtụ mmiri agbanyeghị.
Echere m na nke a na-enyere m aka inweta ya.
Zaghachi Violeta Chaparro A
Ihe atụ zuru oke nke ifelata abụghị otu na ịdị mma. Nke a adịghị mma ma ọ dị egwu, kwụsị ịgha ụgha na Internetntanetị. Dịka nwa akwụkwọ ahụike na onye nọgoro na mgbatị ahụ ogologo oge, ọ bụrụ na ịchọrọ idalata, rie nri kwesịrị ekwesị, yana abụba abụba zuru oke (echefula na abụba dị mkpa mana ndị ahụike adịghị enwe afọ ojuju) ), ike nwere ume na enweghi ume efu, protein (karia ka ichoro inweta aru). Mee isi nri gị bụ mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri na mkpo, azụ na-acha anụnụ anụnụ na, ọ bụ ezie na anụ uhie nwere ọtụtụ protein, anụ ọcha na-adị mma mgbe niile. Mee mmiri ka ọ bụrụ ihe ọ drinkụ drinkụ na-a makeụ ma mee ka ihe ọ superụ drinksụ na-atọ ụtọ nke ukwuu. Ọnwụ ahụ ike dị mma na-aga n’ihu ma na-eju afọ, nri a a kọwara ebe a bụ naanị mmetụta “ọganihu”, ọ ga - eme ka ị ghara ibu ibu n’ụzọ adịghị mma na ụbọchị ole na ole ma emesịa ihe niile ga - adị otu. Ọ baghị uru itinye ahụike gị n'ihe egwu.
Zaghachi Marta Mora Santamaria
Asaa uru nke Fikiere Cranberries